Tondra-drano eny amin’ny faritra iva Antenaina fa hihena, hoy ny tompon’andraikitra
Taorian’ny fitsidihana nataon’ny ben’ny tanànan’Antananarivo, Lalao Ravalomanana, ireo faritra ahiana ho dibo-drano ao anatin’ny fahavaratra dia nilaza ny avy eo anivon’ny boriborintany voalohany fa efa
mandray ny andraikiny hiatrehana ny fahavaratra izy ireo. Misy ny tatatra mbola tsentsina ary eo am-pisikorana azy ireny isika izao, hoy ny lefitry ny delege, Heriniaina Razanadrakoto. Zava-poana anefa ny ezaka rehefa manary fako amin’ny toerana tsy azo hanaovana izany ireo mponina. Anisan’ny nandraisana fepetra manokana ny alatsinainy teo), raha ny nambarany, ny fokontanin’Ambodin’Isotry satria orana kely dia naha tondra-drano teny an-toerana. Nifarimbona ny fokontany sy lehiben’ny tsena ary ny boriborintany nanala ireo tsentsina. Antenaina, hoy izy, fa mba hihena amin’izay ny tondra-drano eto Antananarivo amin’ity taona ity.